Unqulo & Umoya Iinkolelo & Imfundiso
by URachel Bruner
Cwangcisa iiDates ezilula kwaye ezingabizi, ngelixa zigcina iiNqanaba eziPhakamileyo eziPhakamileyo
Njengamalungu eCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints , sinemilinganiselo ephezulu malunga nokuthandana kwe-LDS.
Ulutsha olungamaMormon luyalelwa ukuba ulinde
Ulutsha lwe-LDS lucekwa ukuba lungabi namhla de kube beminyaka engama-16 ubudala. Isikhokelo sokulinda kuze kube yimini sisikhokelo esiphefumlelweyo sabaprofeti basuku lokugqibela . Xa ilandelwa, izisa iintsikelelo.
Izingozi zikhoyo xa uhlala ngaphambi kokuba unengqondo nangokwengqondo ukukwazi ukujongana neemvakalelo zomzimba ezivela kubuhlobo obunzulu.
Ngomhla kuphela abo abaneziGangatho eziPhakamileyo zokuziphatha
Xa ukhetha umntu oza kutshatyalaliswa, khangela kwaye ufike kuphela ngaba bantu abanemilinganiselo ephakamileyo yokuziphatha . Ukuba awuqinisekanga, ubuncinci ulinde uze uqiniseke ngomlingiswa waloo mntu. Umbuzo omhle ozibuzeyo xa ucamngca umhla onokwenzeka ukuba uzibuze ukuba umntu uphila imilinganiselo yevangeli.
Musa umhlobo nomntu omaziyo uya kukulinga ukuba unciphise imigangatho yakho okanye ubuchule bakho. Kungcono ukuba ungabikho umhla uze ufike kumntu ongakuhloneliyo. Njengendodana okanye intombi kaThixo, unelungelo lokuhlonishwa, kwakunye nokuhlonela abo udibana nabo.
Gwema ukutshata Nabani na ongenako ukutshata endlwini
Njengelungu leCawe likaYesu Kristu, ukhuthazwa ngamandla ukuba uhlale kunye namanye amalungu okholo lwethu. Ngenxa yemigangatho yethu ephakamileyo, sikholelwa ekuthandeni kuphela abo bahloniphayo kwaye bagcina imiyalelo kaYesu Kristu .
Amava ozuzayo ngokuthandana nawo aya kukulungiselela umtshato wetempile .
Amathuba omtshato wetempile onoyobileyo onempilo kakhulu xa uhlala kuphela nabangcwele beeNtsuku zokugqibela abagcina imilinganiselo efanayo.
Yeka Ukutshatyalaliswa Okuzinzileyo
Ulutsha kufuneka luphephe ukutshata nomntu ofanayo rhoqo. Kukulungele ukulinda de ude ude ufikelele kumntu, njengemva kokufunda esikolweni esiphakamileyo kunye nangemva kokumisa.
Umongameli wangaphambili nomprofeti uGordon B. Hinckley waxwayisa:
Ukuthandana ngokukhawuleza ebuntwaneni obuncinci kubangela ukuba kubekho intlekele. Izifundo zibonise ukuba inkwenkwana nentombazana zihlala zithandana, mhlawumbi ziza kuba yingxaki.
Kungcono, bahlobo bam, ukuba uhlalutye iintlobo zamaqabane uze ulungele ukutshata. Yiba nexesha elihle, kodwa uhlale ungaqhelekanga. Gcina izandla zakho kuwe. Kungabi lula, kodwa kunokwenzeka.
Iqela kunye neDating Dating
Xa uqala ukutshata kunye nobuselula bakho, kukulungele ukuhlawula ngamaqela okanye uhambe ngemihla emibini. Umhla ophindwe kabini xa wena kunye nomhla wakho womhla uhamba kunye nesibini isibini. Umhla weqela xa iibini ezithathu okanye ngaphezulu zibandakanyeka kumhla kunye kunye.
Ukuthandana nezinye iibinibini kukuzonwabisa kakhulu! Akunakwenzeka nje ukuba incoko ilula, kodwa kukho ukuhleka okukhulu xa abantu bebambisana kwaye bahamba kwiqela leqela kunye. Iqela kunye nokuphandana kabini kukunceda ukugcina izinto ezifanelekileyo.
I-LDS Ukuthandana kunye noMthetho woCoceko
Omnye wemithetho kaThixo eyona mkhulu kukugcina umthetho wobuhlambulukileyo, oku kuthetha ukungabi naluphi na umsebenzi wesondo ngaphandle komtshato. Ngexesha lobudlelwane kufuneka uhlale uhlonipha wena kunye nomhla wakho ngokuyeka ukucinga, ukuthetha okanye ukwenza nantoni na eyenza ivuselele iimvakalelo kunye nokuvusa.
Ukulungiselela Umtshato kunye Nomtshato WeNdlu
Ukugcina umyalelo wobungqina xa udibana nomnye wezona ndlela ezibalulekileyo zokuhlala ufanelekile xa ulungiselela umyalelo kunye / okanye umtshato wetempile. Xa uthandana, ungenzi nto enokubeka ingozi kuwe ekusebenzeni umsebenzi kwaye ungene ethempelini elingcwele leNkosi.
Ukufunda indlela yokuzilawula xa ulwalamano luya kunceda kakhulu ukukulungiselela ikamva elomeleleyo.
Ukuzonwabisa, kodwa Kulula, i-LDS Ukudibana neengcinga
Ukutshata akufuneki kube kubi! Iimali ezinqabileyo, ixabiso elininzi liya kunciphisa ubunzima bakho amava okuthandana. Imihla elula, engabizi iyakwandisa amava akho okuthandana kunye nenani labantu obaziyo.
Ukuthandana kunokuba mnandi njengoko ukhumbula imigangatho yakho kwaye unqande ukuba unzima kakhulu ngokukhawuleza. Ixesha liza kufika ekugqibeleni ukulungelelanisa umtshato wetempile ngobudlelwane obusondeleyo kunye nobudlelwane.
Kuze kube ngoko, khetha ukuxhasa imigangatho yakho kwaye ulandele isiluleko seNkosi xa udibana.
Ukuhlaziywa nguKrista Cook.
Izipho eziphezulu ezi-10 zokusindisa uMsindisi
Indlela yokulungisa uluhlu lwee-72 zeeyure zoHlola lweeNkcitho
Iindlela ezili-15 zokukhonza uThixo ngokukhonza abanye
Yiyiphi indlela yokuxhatshazwa kwezinto ezixutywayo ku-Mormon
Ukutshata kwe-LDS kunye neNkundla
Sembler - ukubonakala
I-Tula de Hidalgo (Mexico) - iToltec City Capital yaseTollan
Iingcamango zokuxabisa zootitshala
UbuBuddha: Philosophy okanye Inkolo?